FBC - Dhaabbati Fayyaa Addunyaa biyyoonni hundi zayitni jajjaboo (trans fats) faayidaarra akka hin-oolle akka dhorkan hubachiise
Dhaabbati Fayyaa Addunyaa biyyoonni hundi zayitni jajjaboo (trans fats) faayidaarra akka hin-oolle akka dhorkan hubachiise
Finfinnee, Caamsaa 8, 2010 (FBC) Dhaabbati Fayyaa Addunyaa (WHO) biyyoonni zayitii furdaa (trans fats) dhiheessii nyaataa isaanii keessaa akka baasan, yoo barbaachise seera dhorku akka kaa’an hubachiise.
Zayitiin ujummoo dhiiga deddeebisu onnee cufa jedhame kun waggaatti namoota miliyoona walakkaa du’aaf akka saaxiluu fi sirumaa barbaachisaa akka hin-taane Dhaabbati Fayyaa Addunyaa ibseera.
Daayirektarri Olaanaa Dhaabbatichaa Doktar Tewoodroos Adihaanom Gabrayasuus “daa’imman keenya nyaata isaanii keessatti nyaata fayyaaf balaa qabu akkanaa maalif qabaatu” jedhaniiru.
Zayitiiwwan ‘trans fats’ jedhamanii waamaman kunniin bal’inaan nyaata kannneen akka kuukiisii hojjachuu fi dinnicha, bargarii fi kkf bilcheessuuf faayidaarra oolu. Akkaataan itti hojjatamanis zayita dhangala’aa gara jajjaboo yookiin hanga tokko jajjaboo ta’etti jijjiiruuni; zayita dhangala’aa caalaa turuu akka danda’aniif. Haata’u malee, zayita kana akka dhadhaa jajjaboo gochuuf keemikaalli faayidaarra oolu ujummoon onnee dhiiga deddeebisu akka cufamu godha.
Dhaabbati Fayyaa Addunyaa akka jedhetti zayitiin ‘trans fat’ kun carraa dhibee onneef saaxilamuu dhibbantaa 21n akkasumas du’aa dhibbantaa 28 dabala.
Zayitni jedhame kun uumamaanis foon kanneen akka foon saawwaa fi hoolaa, fi bu’aalee haannanii keessatti ni-aragama. Nyaata uumamaa keessaa zayiata kana (Trans fat) baasuuf malli filatamaan dhibus, ogeeyyiin imaammata nyaataa zayitni kun (trans fat) harka namaan hojjatamee nyaata dhala namaaf faayidaarra ooluusaaf iddoon akka hin-jirre itti-waliigalu.
Oduuwwan Biroo « Arraabduu rifeensaa	Dhibee tiruu fi yaalasaa »